‘यस्तो लाग्छ दर्शकले नहेरिदिए हुन्थ्यो’ : ऋचा शर्मा « Ramailo छ
‘यस्तो लाग्छ दर्शकले नहेरिदिए हुन्थ्यो’ : ऋचा शर्मा
प्रकाशित मिति : Nov 28, 2017
नायिका ऋचा शर्मा छनोट गरेर फिल्म खेल्ने नायिकामा पर्दछिन् । यद्पी केही फिल्महरु भने नचाहेरै आफुले खेल्नु परेको बाध्यता उनले खुलाएकी छिन् । कुन कुन फिल्म ऋचाले नचाहेर पनि खेल्नु पर्यो त ?
‘मैंले केही फिल्महरु पनि खेले जसको म नाम लिन सक्दिन’, किन ? ‘हामी कहिले काही पैसाको लागि पनि काम गर्छौं । र, सम्बन्ध टिकाउन पनि ।’ ऋचा थप्छिन्, ‘कहिलेकाही यस्ता फिल्महरु फ्लप भएर गएपनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । यस्तो लाग्छ कि दर्शकले नहेरिदिए हुन्थ्यो ।’ ‘टलकजं भर्सेस टुल्के’ मा निभाएको ‘फूली’ र ‘आधा लभ’ को भूमिकाले भने लामो आफुलाई लामो समयसम्म झक्झकाएको ऋचाको भनाई छ ।
ऋचाले ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ बाट उत्कृष्ट नायिकाको राष्ट्रिय पुरस्कार पाइन् । तर यसै साल प्रदर्शनमा आएको उनको निर्माण र अभिनय रहेको आधा लभ सफल भएन । ‘छक्का पञ्जा’ लाई गरेको टिप्पणीबाट ऋचा अहिले चर्चामा छन् । भिडियो हेर्नुस् :